Apple AirPods dia hahazo fanamarinana hanoherana ny rano sy ny fiasa "Hey Siri" | Avy amin'ny mac aho
Ny taranaka vaovao AirPods dia somary lavidavitra kokoa noho ny fanolorana azy araka ity tatitra Bloomberg ity, satria izao dia miresaka momba ny taona 2019 ho an'ny fanombohana ny AirPod sasany izay hohamarinina hanoherana ny rano (tsy hilentika) ary afaka manampy ny safidy "Hey Siri".
Na izany na tsy izany, ny AirPod amin'izao fotoana izao dia manana fanoherana rano tsy voamarina, midika izany fa azontsika atao ny mampiasa azy ireo mangina amin'ny gym, mihazakazaka na na dia avy aza ny orana ary tsy midika izany fa hanimba antsika izy ireo. Azo inoana fa ny zava-dehibe dia manana fanamarinana izy ireo tahaka ny nitranga tamin'ny Apple Watch Series 0 sy ny Series 1 taty aoriana, ny voalohany tamin'ny smartwatches an'i Apple dia niteraka resabe noho ny tsy fananany fanamarinana manohitra ny rano, zavatra iray izay voaporofo fa tsy ilaina satria mitazona fandroana tanteraka izy ary na i Apple aza dia nanoro hevitra ny hanadiovana ny satroboninahitra nomerika amin'ny fametrahana ny famantaranandro eo ambanin'ny paompy .. .
Ity dia eo anoloana iray hafa izay manampy ny an'ny boaty miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby izay nasehon'i Apple tamin'ny volana septambra lasa teo tamin'ny fampisehoana ny iPhone. Tsy isalasalana fa zava-dehibe ny vaovao ho an'ny kinova faharoa ary mino izahay fa antenaina, ny fanamarinana momba ny fanoherana ny rano na ny fampiasana "Hey Siri" fa tsy ny fikasihana ny AirPod mihitsy no zava-dehibe. AirPods amin'izao fotoana izao dia manohitra tsara ny hatsembohana, ny ranonorana ary ny toy izany, saingy Tsy tokony hitsambikina miaraka amin'izy ireo isika, tahaka ny tsy azo atao amin'ity kinova vaovao ity na eo aza ny fanamarinana.
Apple tsy manasarotra ary toa ho lavitra ny dingana, noho izany andrasana ny hamoahana ity kinova faharoa an'ny AirPods lehibe ity ny faran'ity taona ity na ny fiandohan'ny taona manaraka dia tsy misy daty manokana. Ho an'ireo izay resy lahatra amin'ny fividianana AirPods izao, ny torohevitra dia ny tokony hanaovana izany ary aza te hiandry hoe rahoviana no halefa ity kinova ity na toa izany satria mbola lavitra ny lalana ary mandritra ity fotoana ity dia hankafizin'izy ireo ny telefaona Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple AirPods dia hahazo mari-pankasitrahana hanoherana ny rano sy ny fiasa "Hey Siri"